Oduu Gammachiisaa: Mootummaan Jarmanii %100 Oromoo akka deeggarru Ibse | Oromia Shall be Free
bilisummaa December 20, 2015	1 Comment
Akkam jirtan yaa lammiiwwan kiyya. Akkatti jirru walumaanu beekna natti bareetin isin gaafadhe dhiifama akka itti jirru wallaaleti miti. Hundi keenya mootummaa wayyaanee ilmaaf abbaa ykn haadhaaf ilma walirratti ajjeesaa jiru kana laalaa akkamitti nagaa qabdaani jettanii nu gaafattan badii tiyya ta’uu amaneetin fudhadha.
Ani mootummmaa wayyaanee kan osoo AMNEST INTERNATIONAL NAMOOTA 75 Seera malee ajjeefamee jedhee gabaase namoota 5 qofatu ajjeefame jedhee balaaleffattu sanii miti. Mootummaan Wayyaanee waggaa 10 dura bara 2005 deeggartoota paartii QINIJJIT jedhamu 26 ajjeefamuun isaani yeroo himamu lakkoofsa 26 akka lakkoofsa 75 waakkatan kanatti hin waakkanne.
Dubbi himaan mootummaa Jaramanii guyyaa har’aa waan danda’ame hundaan akka Uummata Oromoo deeggaran, akka namoota Jarmanii Itoophiyaa keessa jiran hojii isaanii dhiisanii gara Jarmanii deebi’aniif akka amma booda hariiroo mootummaa Itoophiyaa waliin qaban dhaaban wadaa galaniiru. ‪#‎VivaGermany‬. Kun
Sochii guddaa baqattootni Oromoo Jarmanii keessa jiran godhanirra kan dhufe waan ta’eef ‪#‎VivaOromoDiasporaInGermany‬ jennee galateeffachuu qabna.
Wayyaaneen adurreedha. Adurreen mirga hantuutaa ni kabajjiif yoo kan jettan taate wayaaneen mirga Oroomoo hin tuqxu jedhaati waan Ameerikaan odeesditu jala deema. Mirga ofii abbumatu kabajjiifata yoo kan jettan ta’e wayyaane, Ameerika, Jarmanii kkf hundarraa walaba taanee of dandeenyee yaa qabsoofnu. Garuu, warra adeemsa qabsoo keenyaa keessatti waan barbaachisaa ta’e nuuf gumaachaa jiran akka galateeffachuu qabnu dagachuu hin qabnuun dhaamsa kooti. Akkuma Nelson Mandeellan General Tadesse Biru “Long Walk To Freedom ” kitaaba jedhee barreesse Keessatti bakka guddaa kenneef Deebiin guyyaa har’aa mootummaa Jarmaniirraa arganne kun kan bakka guddaa qabuu plzzzzz nurraa hin dagatinaa. Ammas beektota keenya ‪#‎OromoAnonymousHackers‬ jedhaman kan barattootafi qotee bulaa Oromoo bira dhaabbatani Waraana Wayyaanerraatti duula addaa banan nuuf jajjabeessan isiniin jedha isin hoo maal jettu?
Next #FIQAADUU SHUMATAA guyyaa kaleessaa qabamee hidhamuun isaa beekamee jira.